အမေဇုံရောင်းသူများ - MICCOND စက်ရုပ်သုံးကိရိယာ, Mini Grinder Tool, Rotary Tool actionory
နေအိမ် / အလုပ်အကိုင် / အမေဇုံရောင်းသူများ
ပထမ ဦး ဆုံးအနေနှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် Amazon Platform ၏ဖောက်သည်အခြေစိုက်စခန်းနှင့် ပတ်သက်. ယေဘုယျအားဖြင့်နားလည်မှုရှိစေရန်နှင့်အသုံးပြုသူလိုအပ်ချက်များကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပါကသက်ဆိုင်ရာနှင့်အသုံး0င်သောဒီဇိုင်းအချက်အလက်များကိုခွဲထုတ်ပါ။ ထို့နောက်ကျွန်ုပ်တို့သည်သမဝါယမစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်ထိရောက်သောနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဆက်သွယ်မှုကိုလုပ်ဆောင်လိမ့်မည်။ ပလက်ဖောင်းသုံးစွဲသူများနှင့်ကုန်သည်များ၏လိုအပ်ချက်များနှင့်ကုန်သည်များ၏လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီကျွန်ုပ်တို့သည်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားသောထုတ်ကုန်များသည်ဈေးကွက်ပြိုင်နိုင်မှုရှိစေရန်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲရန်အသစ်များပြုလုပ်မည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏လက်ရှိထုတ်ကုန်များအတွက်အမေဇုံကုန်သည်များအတွက်အနိမ့်ဆုံးအမိန့်ပမာဏမှာအပိုင်း 500 ဖြစ်သည်။ သို့သော်ပမာဏပိုမိုမြင့်မားလေလေစျေးနှုန်းနှင့်သက်ဆိုင်သောအထူးလျှော့စျေးရှိလိမ့်မည်။
ကုန်ပစ္စည်းများ၏ကုန်ပစ္စည်းတင်ပို့မှုကိုကျွန်ုပ်တို့ထောက်ခံသည်။ အမေဇုံကုန်သည်များသည်၎င်းတို့၏ဖောက်သည်များ၏လိပ်စာများကိုသာပေးရန်သာလိုအပ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သက်ဆိုင်ရာကုန်တင်ကားများကိုရှာဖွေပြီးကုန်သည်များအားသတင်းပို့ပါမည်။ ကုန်တင်ကုန်ပြီးထုတ်ကုန်စျေးနှုန်းမှအပကုန်သည်များသည်အခြားအခကြေးငွေပေးဆောင်ရန်မလိုအပ်ပါ။ ကောင်းသောကုန်ပစ္စည်းများသယ်ယူပို့ဆောင်ပေးခြင်းသည်ကုန်သည်များကိုအဆင်ပြေစေနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များအတွက်တစ်နှစ်အာမခံချက်ပေးပါ။ ချို့ယွင်းချက်ရှိလျှင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အစားထိုး0န်ဆောင်မှုကိုအစားထိုးပေးပြီးသုံးစွဲသူများသည်စိုးရိမ်ပူပန်မှုများမရှိပါကဖောက်သည်အားစက်အသစ်တစ်ခုပေးလိမ့်မည်။
JADE နှင့် Rosewood0ယ်ယူရာတွင်အထူးပြုသောမြန်မာဖောက်သည် Godanway သည်ဤလုပ်ငန်းတွင်ငါးနှစ်မှခြောက်နှစ်ခန့်တွင်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ မန္တလေးမြို့တွင်မြန်မာနိုင်ငံတွင်သူ၌အဖိုးတန်ကျောက်စိမ်းသိုလှောင်ရန်မိတ်ဖက်များနှင့်အထူးလူသားအားလုံးရှိသည်။ ကျောက်စိမ်းသည်ချောချောမွေ့မွေ့ဖြစ်ရန်နှင့်အချောထုတ်ကုန်ဖြစ်ရန်ထွင်းထုရန်လိုအပ်သည်။ Rosewood သည်လည်း DIY လိုအပ်သည်။ သူအရင်ကလုပ်ခဲ့တဲ့ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူမှဒီဇိုင်းထုတ်ထားတဲ့ထုတ်ကုန်နဲ့ပြaနာတစ်ခုရှိတယ်, သူကအခြားကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူတစ် ဦး တစ်ယောက်ကိုပြောင်းလဲချင်တယ်, ဒါကြောင့်သူကကျွန်တော်တို့ကိုအီးမေးလ်ဖြင့်ဆက်သွယ်ခဲ့တယ်။ သူ၏ယခင်စက်ကိုဆန်းစစ်ကာဤထုတ်ကုန်၏အားနည်းချက်များကိုတွေ့ရှိခဲ့ခြင်း, ကျွန်ုပ်တို့၏ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်းကိုအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းနှင့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့် ပတ်သက်. ဖောက်သည်နှင့်ဆက်သွယ်ခဲ့သည်။ ပြုပြင်မွမ်းမံထားသောသုံးကြိမ်သို့မဟုတ်လေးကြိမ်အပြီးတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ရေးဆွဲခြင်းများကိုအပြီးသတ်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး, ကျနော်တို့ပထမ ဦး ဆုံးအသုတ်အတွက်အပိုင်း 1000 ကိုထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ လက်ခံရရှိပြီးနောက်ဖောက်သည်အလွန်ကျေနပ်ခဲ့သည်။ တစ်လအကြာတွင်သူသည်အမေရိကန်နှင့်ဒုတိယအကြိမ်အဖြစ်ဒုတိယအမိန့်ကိုထည့်သွင်းခဲ့ပြီးနံပါတ် 5000 အထိရောက်ရှိခဲ့သည်။